Wararka - Hadhuudhka ceyriinku wuu sii kordhayaa, soosaarayaasha ayaa kordhiya qiimaha midba midka kale ka dib, iyo suuqa loo yaqaan 'lysine' iyo 'threonine booda'
Hadhuudhka ceyriinku wuu sii kordhayaa, soo saarayaasha ayaa kordhiya qiimaha midba midka kale ka dib, iyo suuqa loo yaqaan 'lysine' iyo 'threonine boodboodka'
Kadib Dabbaaldeggii-Dayrta-Dhexe iyo Maalinta Qaranka, qiimaha hadhuudhka ayaa sare u kacay, qiimaha hadda lagu iibsanayana wuxuu dhaafey 2,600 yuan / tan, oo ah mid sare oo afar sano ah. Waxaa saameeyay kororka kharashaadka, shirkadaha lysine iyo threonine ayaa dhawaanahan sii waday oraahdooda midba midka kale. Suuqa lysine iyo threonine hore ayaa loo qaaday, wuuna sare u booday. Waqtigaan la joogo, sicirka suuqa 98% lysine waa 7.7-8 yuan / kg, qiimaha 70% lysine waa 4.5-4.8 yuan / kg. Suuqa threonine Qiimaha waa 8.8-9.2 yuan / kg.
Suuqa hadhuudhka cayriin “si xoog leh buu u koraa”
Xilliga cusub ee waqooyi-bari ee xilli hadhuudhku waxa soo gaadhay saddex duufaanno isku xiga. Hoy aad u ballaadhan ayaa dhibaato ku keentay goynta hadhuudhka. Horumarka gaabiska ah ee liiska hadhuudhka cusub iyo rajooyinka suuqa ee xoogan. Shirkadaha hoose waxay sare u qaadeen sicirka si ay u soo qabtaan hadhuudhka. Beeralayda kore waxay diidanaayeen inay iibiyaan. Suuqa galleyda ayaa kacay bishii Oktoobar. , Laga bilaabo Oktoobar 19, qiimaha celceliska gudaha ee hadhuudhku wuxuu ahaa 2387 yuan / ton, ilaa 5.74% bil-bil iyo 31.36% sannad-sannadeedka. Qiimaha istaarijka galleyda wuxuu ka kacay 2,220 yuan halkii tan tan biloowgii sanadkan wuxuuna gaaray 2,900 yuan halkii tan tan todobaadkan, koror ka badan 30%. Isla mar ahaantaana, kor u kaca degdegga ah wuxuu kordhiyay halista suuqa ee dib u soo wicitaanka, laakiin qiimaha ayaa weli sarreeya. Dhawaan, qiimaha alaabta ceyriinka ayaa sare u kacday oo ay adagtahay in la iibsado, iyo cadaadiska qiimaha ee shirkadaha wax soo saarka qotada dheer ayaa aad u kordhay. Si dhakhso leh ayey ulasocodeen waxayna soo kiciyeen oraahyadooda.
Awoodda wax soo saarka doofaarka guryaha ayaa sii socota si ay u soo kabato
Baahida guryaha ayaa sii kordheysa. Dhawaan, afhayeen u hadlay Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka ayaa sheegay in dhamaadka rubuca saddexaad, tirada doofaarrada nool ay ahaayeen 37.39 milyan, koror sanadle ah oo 20.7% ah; iyaga dhexdooda, tirada beero abuurka waxay ahayd 38.22 milyan, koror ah 28.0%. Xogta ay soo saartay Ururka Warshadaha Feed sidoo kale waxay arki kartaa soo kabashada joogtada ah ee awoodda wax soo saarka doofaarka. Bishii Sebtembar, soosaarka quudinta doofaarku wuxuu ahaa 8.61 milyan tan, kororka 14.8% bishiiba iyo kororka sanadka ee 53.7%. 9-kii bilood ee la soo dhaafay, soosaarka quudinta doofaarka ee billaha ah ayaa kordhay bil-bil marka laga reebo Janaayo iyo May; waxayna kordhay sanadba sanadka ka dambeeya 4 bilood oo xiriir ah tan iyo bishii Juun. Baahida loo qabo gobollada shisheeye way daciiftay, taajka cusub ee faafa ee Yurub iyo Maraykanka ayaa laba jeer soo laba kacleeyay, dhaqaaluhuna mar labaad ayuu hoos u dhacay rubucii afaraad, isagoo sameeyay faqash labaad
Isku soo wada duuboo: baahida dalku way sii kordheysaa, dalabka shisheeye waa daciif yahay, qiimaha hadhuudhka marxaladda hore waa sarreeyaa, mugga dhoofinta ee amino acid wuu sii yaraanayaa, qaar ka mid ah shirkadaha lysine iyo threonine ayaa ku sugan aagagga khasaaro. Shirkadaha waxsoosaarka amino iyo threonine waxeey dhib ku qabaan goynta hadhuudhka, heerka hawlgalku wuu hooseeyaa, cadaadiska qiimaha ayaa aad caan u ah, aragtida sicirka waa mid xoogan, suuqa waxaa taageera hawlgal xoog leh, dabagalku wuxuu u baahan yahay inuu fiiro gaar ah u yeesho hadhuudhka suuqa iyo isbeddelada ku yimaadda sicirka wax soosaarayaasha.
Fasalka L-Threonine Pharm, Fasalka Cuntada L-Threonine, Nafaqada xoolaha, 73-32-5 L-Isoleucine, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, L-Valine 72-18-4,